भीम रावल र विष्णु पौडेलले बनाएको ड्राफ्टबारे आज छलफल हुने, काे-काे भए उपस्तित ? — Imandarmedia.com
१विमानस्थलमा लफडा, सांसद काण्डले मच्चायो हंगामा
२काठमाडौमा धेरै राम्रा बसहरु छन्।
भीम रावल र विष्णु पौडेलले बनाएको ड्राफ्टबारे आज छलफल हुने, काे-काे भए उपस्तित ?
काठमाडाैँ । नेकपा एमाले विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलको आज पनि बैठक बस्दैछ। सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा साढे ११ बजे बस्ने बैठकमा उपाध्यक्ष भीम रावल र उपमहासचिव विष्णु पौडेलले तयार पारेको ड्राफ्टमाथि छलफल हुँदैछ।
बिहिबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्रीसमेत रहेका उपमहासचिव पौडेल अनुपस्थित भएपछि विषयवस्तुमा छलफल हुन सकेको थिएन। मन्त्रिपरिषद बैठकमा पौडेल सहभागि भएकाले उनी छलफलमा आएनन्।
२०७५ जेठ २ को अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउन सहमतिको अन्तिम तयारी भएको एमाले सचिव भीम आचार्यले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए। ‘हाम्रो बैठक सकारात्मक तरिकाले अघि बढेको छ। अब फाइनल टच गर्न बाँकी छ। रावलजी र विष्णुजीले ड्राफ्ट बनाएका छन्। त्यसमा हिजो छलफल हुन पाएको छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद बैठक परेर विष्णुजी हिजो आउनुभएन। ड्राफ्ट गर्ने एक जना मान्छे नभएकाले त्यसमाथिको छलफल अघि नबढेको हो।’
अहिले तयार भएको ड्राफ्टमा केही विषय थपघट गरेर अरू मिलाउन सकिने उनले बताए। आचार्यका अनुसार जेठ २ अघिको संगठनात्मक अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउने बारे धेरै विषय मिलिसकेको छ। त्यो बेलाको केन्द्रिय कमिटी बैठक बसेर अन्य निर्णय गर्न सकिने आचार्यले बताए। माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेकाको व्यवस्थापनसमेत त्यही केन्द्रीय कमिटी बैठकले गर्नेगरी सहमतिको खाका तयार भएको आचार्यको भनाई छ।
‘आज कार्यदलस्तरमा समहति बन्नसक्छ। किनकि, धेरै कुरा मिलेकोले केही थप्ने काम मात्रै हो। अब मिलाउने हो भने मिल्छ अड्काउ भने अड्किन्छ,’ उनले भने, ‘उहाहरूले गरेको सहमतिमा फेरि गुटमा सहमति खोज्न थाल्नुभएको हो भने मात्रै हो। अन्यथा मिलाउनुपर्ने धेरै विषय सकिएको छ।’
स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कसरी लिने भन्नेमा बीचको भाषामा सहमति जुटाउन अझै बाँकी छ। कार्यदलमा सहमति भयो भने प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बसेर त्यसलाई अन्तिम रूप दिनेछन्।
पार्टी एकताका लागि वरिष्ठ नेता नेपाललाई दोस्रो अध्यक्षसमेत दिन सकिने प्रस्ताव ओली पक्षले राखे पनि नेपाल पक्षका सचिव भीम आचार्यले भने कार्यदलमा यस विषयमा छलफल नभएको दाबी गरे।
‘दुई अध्यक्ष हुँदाखेरी ठिकै हुन्छ तर त्यो हाम्रो अडान होइन। हाम्रो आधारभूत अडान त हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौ। तर दुई अध्यक्ष हुँदा अहिलेको असामान्य स्थितिलाई समेटेर जान सकिन्छ भन्नेसमेत आएको छ,’ उनले भने, ‘कार्यदलमा यो विषय प्रवेश भएको छैन। उहाँहरू दुई जनाको बीचमा सहमति हुन्छ भने ठिकै छ। तर कार्यदलमा हामीले जेठ २ लगायतका अडान मात्रै राखेका छौ।’